Miorina amin'ny maotera fanodinana sary misy kaody H.265, miaraka amin'ny sensor an-trano tsy misy hazavana avo lenta avo lenta, dia afaka manome ny kalitaon'ny sary mazava, malefaka sy malefaka ary antsipiriany tsara amin'ny sary ary mamoaka 2.1 tapitrisa pixel-level avo. famaritana sary video.Integrated 33x optical zoom ultra-high-definition lens hazavana hita maso, raha manome fomba hafa fidirana amin'ny horonan-tsary, mifanaraka tsara, mety amin'ny fampidirana vokatra toy ny fakan-tsary dome hafainganam-pandeha miovaova, pan/tilt mitambatra.
Ny 4 megapixels miaraka amin'ny fiasan'ny famoahana tambajotra ary ny habeny sy ny lanjany faran'izay kely dia afaka manampy ny mpampiasa hampiditra ny maody amin'ny ankamaroan'ny fakantsary.Ny zoom optika 33x dia mahafeno ny filan'ny ankamaroan'ny sehatra fampiasana.Ny ekipa R&D mahaleo tena dia afaka manome anao ny lafiny rehetra amin'ny serivisy namboarina sy ny fitarihana ara-teknika aorian'ny varotra, ny hanohizana ny famoronana lanja ho an'ny mpanjifa dia ny filozofiay tsy tapaka.
Fakan-tsary lavitra lavitra amin'ny alina: fakan-tsary fakan-tsary mafana amin'ny TC sy HP-RC0620C, HP-RC0620HW fakan-tsary laser lavitr'ezaka dia manana fahaiza-mijery lavitra lavitra amin'ny alina mihoatra ny 1000 metatra, mamaha tsara ny olan'ny fakantsary mahazatra izay tsy afaka miasa amin'ny alina. tontolo maizina madio amin'ny alina.
Fanafoanana ny hazavana mahery vaika: ny fanatsarana ny fakan-tsary amin'ny onjam-peo infraroda sy ny teknolojia fikandrana optika laser ultra-tety dia afaka manafoana ny famirapiratry ny hazavana vokatry ny jiron'ny fiara amin'ny sary CCD, ary afaka manao sary mazava andro aman'alina eo ambanin'ny tontolon'ny jiro sarotra amin'ny lalamby sy ny lalambe.
Fanaraha-maso amin'ny toetr'andro rehetra: Famantarana ny hafanana mafana, zavona mahery, ny orana sy ny oram-panala, ny fanonerana ny backlight izay afaka mampifanaraka amin'ny toe-pahazavana isan-karazany, mba hahazoana antoka fa azo alaina amin'ny andro, alina ary backlight ny sary mazava.
Fitantanana fitaovana afovoany: Ny mpampiasa dia afaka miditra lavitra amin'ny mpizara fitantanana foibe mba hitantana ireo fitaovana sy loharano isan-karazany ao amin'ny rafitra.
Ny rafitra cascading multi-level: manohana protocols tambajotra marobe, manohana IP mavitrika, vokatra fanaraha-maso eo anoloana dia afaka miditra ho azy amin'ny tambajotra amin'ny alàlan'ny ADSL, manohana CDMA1x, fifindran'ny Wireless 3G.
Fitantanana fitehirizana voazara: Mampiasa teknolojia fitantanana fitehirizam-bokatra izy io mba hanatanterahana ny fitehirizana ambaratonga sy tambajotra.Manana fomba fandraketana maro izy io toy ny fandrindrana, fifamatorana, ary boky fampianarana, ary koa ny fandraketana an-tsoratra sy ny fiverenana mitsidika.Mety sy haingana ny miasa.
Fandefasana mivantana amin'ny horonan-tsary miaraka: manohana ny unicast/multicast, fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny efijery maro, ary manana fiasa mandehandeha mivondrona.
Fifandraisana amin'ny feo roa: intercom na fampielezam-peo dia azo atao amin'ny alàlan'ny tambazotra rehetra mankany amin'ny teboka fanaraha-maso eo aloha.
Fitantanana fanairana fifandraisana: Aorian'ny fisehoan-javatra fanairana, ny rafitra dia afaka manetsika avy hatrany ny andiana fifamatorana efa nomanina mba hahatsapana ny faharanitan-tsain'ny rafitra fanairana.
Matrix tambajotra virtoaly: Ny teboka fanaraha-maso eo anoloana sy ny decoder horonan-tsarimihetsika dia azo fehezina amin'ny fomba tsy ara-dalàna mba hahatsapana ny matrix virtoaly amin'ny tambajotra, ary hifehy ny rindrin'ny fahitalavitra mba hahatsapana ny fanaraha-maso sy ny fiovam-po vondrona.
Fitantanana mpampiasa ambaratonga: Mametraha mpampiasa amin'ny ambaratonga rehetra mifanaraka amin'ny filana samihafa, ary mampiasa fahazoan-dàlana samihafa hidirana amin'ny loharano samihafa.
Fitetezana WEB: Ny mpampiasa dia afaka mijery ny loharanon-dahatsary ao amin'ny rafitra amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny navigateur IE amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza, ary mitantana loharano miaraka amin'ny fahazoan-dàlana mifanaraka amin'izany.
family Focal Length 5.5-180mm,33x Optical Zoom
Aperture Range F1.5-F4.0
Sahan'ny fijery mitsivalana 60.5-2.3° (malalaka-tele)
SARY(Fanapahan-kevitra ambony indrindra:2688*1520) Main Stream 50Hz: 25fps (2688*1520, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60Hz: 30fps (2688*1520, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
interface tsara Interface ivelany 36pin FFC (seranan-tambajotra, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarm In/Out Line In/Out, hery)
Fanjifana herinaratra 2.5W MAX(IR, 4.5W MAX)
teo aloha: 4MP 25x Network Zoom Camera Module
Manaraka: 4MP 37x Network Zoom Camera Module